အသည်းကွဲနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုအဆင့်ဆင့်လေးတွေကြုံရလိမ့်မယ် 💔 – Trend.com.mm
အသည်းကွဲနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုအဆင့်ဆင့်လေးတွေကြုံရလိမ့်မယ် 💔
Posted on October 1, 2018 by Noel
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့အချိန် အသည်းကွဲနေတဲ့အချိန်မှာ အသည်းတစ်ခုတည်းကွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တွေရဲ့ အပြုအမူတစ်ချို့ကပါလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲလာတတ်ကြပါတယ်။အသည်းကွဲပုံအဆင့်ဆင့်ဆိုသလို အသည်းကွဲပြီးတဲ့အခါ ပြောင်းလဲလာတဲ့အပြုအမူတွေ၊စိတ်ခံစားချက်အဆင့်ဆင့်လေးတွေရှိပါတယ်။သင်ရော အသည်းကွဲနေလား?ဒီထဲက ဘယ်အဆင့်ထိရောက်ပြီလဲ?
အဆင့် ၁ *ညဘက်အိပ်ပျော်ဖို့အရမ်းခက်လာတယ်
အထူးသဖြင့် အသည်းစကွဲတဲ့အချိန်မှာ ညဘက်တွေဆို တော်ရုံနဲ့အိပ်မပျော်နိုင်တော့ပါဘူး။ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ အိပ်ချင်လည်း မျက်လုံးကကိုယ့််စကားကိုနားမထောင်ပါဘူး။ငါသာ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရင်၊ငါသာ ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေက သင့်ရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းကိုနှောင့်ယှက်ထားတတ်ပါတယ်။
အဆင့် ၂ *သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လျှောက်လည်နေရင်တောင် မပျော်ရွှင်နိုင်ဘူး
အသည်းကွဲနေလို့စိတ်ပြေလက်ပျောက်သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လျှောက်သွားလျှောက်လာရင်တောင် အပြည့်အ၀မပျော်နိုင်ဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပျော်တော့ပျော်တယ်။ဒါပေမဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ပြီးတော့ ဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ့သင်တို့စုံတွဲအတူတူလျှောက်သွားခဲ့
ဖူးရင် ပိုပြီးတောင် သတိရသွားစေပါတယ်။
အဆင့် ၃*ပုံမှန်လုပ်နေကျအရာတွေတောင် အမှားမှားအယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်
ကိုယ်ခါတိုင်းလုပ်နေကျအရာတွေဟာ အခုချိန်မှာအရမ်းခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။အသိစိတ်လွတ်နေသလိုမျိုးပေါ့။ဒီအလုပ်ကိုအရင်ကလုပ်ဖူးပေမဲ့စိတ်က အပြည့်အ၀မပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အခါ တစ်ခါတည်းနဲ့မရပဲ ထပ်တလဲလဲပြန်လုပ်နေရတတ်၊အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အဆင့် ၄*အမှတ်တရတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီး ၀မ်းနည်းပူဆွေးလာ
နှစ်ယောက်တွဲဓာတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်ရင်းအဲ့ဒီတုန်းကဘယ်လိုပျော်ခဲ့တာဆိုပြီး ပြန်တွေးလိုက်၊နှစ်ယောက်အတူကြည့်ဖူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေတစ်ယောက်တည်းကြည့်နေရတဲ့အခါအထီးကျန်လိုက်နဲ့ သွားပြီးပြေးတွေ့တော့မလို ၀မ်းနည်းတဲ့ခံစားချက်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။တစ်ခြားစုံတွဲတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာလည်း ၀မ်းနည်းလာပြီး သူမပါပဲ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေး
အဆင့် ၅*တစ်ယောက်တည်းနေတာက ၀ါသနာအသစ်တစ်ခုလိုဖြစ်လာတတ်
တစ်ယောက်တည်းသွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်ဖြစ်တာ ကြာလာတဲ့အခါ ဒီလိုတစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့အချိန်မှာအရင်က အချိန်မပေးဖူးတဲ့အရာတွေအတွက် အချိန်ပေးတတ်လာတယ်။စာအုပ်တွေပိုဖတ်ဖြစ်လာတယ်။၀ါသနာပါတာတွေကို သီးသန့်အချိန်လေးဖယ်ပြီးလုပ်တတ်လာတယ်။မိသားစုအတွက်ပိုပြီးအချိန်ပေးတတ်လာတယ်။
အဆင့် ၆ *၀ါသနာအသစ်တွေပိုတိုးလာတယ်
အသည်းကွဲနေတဲ့အချိန်ဆို ချစ်သူနဲ့အတူတူလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတွေကိုပြန်သတိရပြီးဆွေးနေလွမ်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလိုအလွမ်းအဆွေးအချိန်ကိုသက်သာစေဖို့ တစ်ခြားတစ်ခုခုနဲ့အစားထိုးတတ်လာတယ်။ဝေးခဲ့ကြပြီဆိုတာကို လက်ခံလာပြီဆိုတဲ့သဘော။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအရင်တုန်းက မလုပ်ဖူးတဲ့အားကစားတို့၊သင်တန်းတို့ ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ့်အရာတွေကို အစားထိုးအသုံးချတတ်လာမယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားပြန်ယူနေတဲ့အချိန်ပါပဲ။
ဘယ်အရာမဆို ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဒွန်တွဲနေတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။အသည်းကွဲတဲ့ခံစားချက်ကဆိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ အသည်းကွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကအရင်ကထက် ပိုပြီးရင့်ကျက်သွားတယ်။အမြင်တစ်မျိုးထက် နောက်ထပ်အမြင်တစ်မျိုးနဲ့လူတွေကိုကြည့်တတ်လာမယ်။ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ
တွေးတတ်လာမယ်။လောကကြီးထဲကို ပိုပြီးဝင်ဆန့်လာတတ်ပါတယ်။ဒါက အကျိုးရှိတာပါပဲ။
အဆင့် ၈*ကိုယ်ဟာထင်ထားတာထက် ပိုပြီးသန်မာပါလားဆိုတာတွေးမိလာမယ်
ဒါကတော့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကျေနပ်ခြင်းတစ်မျိုးပေါ့။ချစ်တဲ့သူနဲ့ဝေးရတယ်။အသည်းကွဲတယ်။နာကျင်ရတယ်၊၀မ်းနည်းရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး အခုကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဟာ ဒီဒဏ်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးတောင့်ခံနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ အရင်က မတွေးခဲ့ဖူးတဲ့အတွေးအခေါ်တွေ၊အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ရခဲ့ပြီ၊ကြုံခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကျေနပ်နေပါလိမ့်မယ်။အရင်လို ပြန်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရယ်မောနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
ကဲ ဒါတွေကတော့ အသည်းကွဲနေတဲ့အချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရမယ့်အဆင့်လေးတွေပါပဲ။ဒီအဆင့်လေးတွေပြီးရင် စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ပြန်ဖြစ်မှာပါနော်။ဒါကြောင့် အသည်းကွဲနေတဲ့အချိန်မှာ မဟုတ်တာတွေလျှောက်လုပ်တာ၊သိသိကြီးနဲ့လမ်းမှားလျှောက်တာမျိုးတွေမလုပ်ပဲ အလိုက်သင့်လေးအသည်းကွဲတဲ့အချိန်ကာလကို ခံစားကြည့်ပါ။ဒီအသည်းကွဲဖို့အတွက် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့လူတစ်ယောက်လုံးကိုအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာ တန်ဖိုးကြီးပါတယ် 🌻
ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့လမျးခှဲလိုကျတဲ့အခြိနျ အသညျးကှဲနတေဲ့အခြိနျမှာ အသညျးတဈခုတညျးကှဲတာမဟုတျပါဘူး။ကိုယျတှရေဲ့ အပွုအမူတဈခြို့ကပါလိုကျပွီး ပွောငျးလဲလာတတျကွပါတယျ။အသညျးကှဲပုံအဆငျ့ဆငျ့ဆိုသလို အသညျးကှဲပွီးတဲ့အခါ ပွောငျးလဲလာတဲ့အပွုအမူတှေ၊စိတျခံစားခကျြအဆငျ့ဆငျ့လေးတှရှေိပါတယျ။သငျရော အသညျးကှဲနလေား?ဒီထဲက ဘယျအဆငျ့ထိရောကျပွီလဲ?
အဆငျ့ ၁ *ညဘကျအိပျပြျောဖို့အရမျးခကျလာတယျ
အထူးသဖွငျ့ အသညျးစကှဲတဲ့အခြိနျမှာ ညဘကျတှဆေို တျောရုံနဲ့အိပျမပြျောနိုငျတော့ပါဘူး။ဟိုတှေးဒီတှေးနဲ့ အိပျခငျြလညျး မကျြလုံးကကိုယျ့စကားကိုနားမထောငျပါဘူး။ငါသာ ဘယျလိုလုပျခဲ့ရငျ၊ငါသာ ဒီလိုလုပျခဲ့ရငျဆိုတဲ့အတှေးတှကေ သငျ့ရဲ့ အိပျစကျခွငျးကိုနှောငျ့ယှကျထားတတျပါတယျ။
အဆငျ့ ၂ *သူငယျခငျြးတှနေဲ့လြှောကျလညျနရေငျတောငျ မပြျောရှငျနိုငျဘူး
အသညျးကှဲနလေို့စိတျပွလေကျပြောကျသူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးတှနေဲ့လြှောကျသှားလြှောကျလာရငျတောငျ အပွညျ့အဝမပြျောနိုငျဘူးဖွဈတတျပါတယျ။ပြျောတော့ပြျောတယျ။ဒါပမေဲ့ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျးတော့မဟုတျဘူးပေါ့။ပွီးတော့ ဒီသူငယျခငျြးတှနေဲ့သငျတို့စုံတှဲအတူတူလြှောကျသှားခဲ့
ဖူးရငျ ပိုပွီးတောငျ သတိရသှားစပေါတယျ။
အဆငျ့ ၃*ပုံမှနျလုပျနကေအြရာတှတေောငျ အမှားမှားအယှငျးယှငျးဖွဈတတျ
ကိုယျခါတိုငျးလုပျနကေအြရာတှဟော အခုခြိနျမှာအရမျးခကျခဲနတေတျပါတယျ။အသိစိတျလှတျနသေလိုမြိုးပေါ့။ဒီအလုပျကိုအရငျကလုပျဖူးပမေဲ့စိတျက အပွညျ့အဝမပြျောဝငျနိုငျတဲ့အခါ တဈခါတညျးနဲ့မရပဲ ထပျတလဲလဲပွနျလုပျနရေတတျ၊အမှားမှားအယှငျးယှငျးတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။
အဆငျ့ ၄*အမှတျတရတှကေိုပွနျစဉျးစားပွီး ဝမျးနညျးပူဆှေးလာ
နှဈယောကျတှဲဓာတျပုံတှပွေနျကွညျ့ရငျးအဲ့ဒီတုနျးကဘယျလိုပြျောခဲ့တာဆိုပွီး ပွနျတှေးလိုကျ၊နှဈယောကျအတူကွညျ့ဖူးတဲ့ရုပျရှငျတှတေဈယောကျတညျးကွညျ့နရေတဲ့အခါအထီးကနျြလိုကျနဲ့ သှားပွီးပွေးတှတေ့ော့မလို ဝမျးနညျးတဲ့ခံစားခကျြကိုမထိနျးခြုပျနိုငျပဲဖွဈလာတတျပါတယျ။တဈခွားစုံတှဲတှကေိုမွငျတဲ့အခါမှာလညျး ဝမျးနညျးလာပွီး သူမပါပဲ ဘယျလိုရှဆေ့ကျရမလဲဆိုတဲ့အတှေး
အဆငျ့ ၅*တဈယောကျတညျးနတောက ၀ါသနာအသဈတဈခုလိုဖွဈလာတတျ
တဈယောကျတညျးသှားလိုကျလာလိုကျစားလိုကျဖွဈတာ ကွာလာတဲ့အခါ ဒီလိုတဈယောကျတညျးနရေတဲ့အခြိနျမှာအရငျက အခြိနျမပေးဖူးတဲ့အရာတှအေတှကျ အခြိနျပေးတတျလာတယျ။စာအုပျတှပေိုဖတျဖွဈလာတယျ။၀ါသနာပါတာတှကေို သီးသနျ့အခြိနျလေးဖယျပွီးလုပျတတျလာတယျ။မိသားစုအတှကျပိုပွီးအခြိနျပေးတတျလာတယျ။
အဆငျ့ ၆ *၀ါသနာအသဈတှပေိုတိုးလာတယျ
အသညျးကှဲနတေဲ့အခြိနျဆို ခဈြသူနဲ့အတူတူလုပျခဲ့ဖူးတဲ့အရာတှကေိုပွနျသတိရပွီးဆှေးနလှေမျးနတေယျဆိုပမေဲ့ အခြိနျကွာလာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလိုအလှမျးအဆှေးအခြိနျကိုသကျသာစဖေို့ တဈခွားတဈခုခုနဲ့အစားထိုးတတျလာတယျ။ဝေးခဲ့ကွပွီဆိုတာကို လကျခံလာပွီဆိုတဲ့သဘော။အဲ့ဒီအခြိနျတှမှောအရငျတုနျးက မလုပျဖူးတဲ့အားကစားတို့၊သငျတနျးတို့ ကိုယျ့အတှကျအကြိုးရှိမယျ့အရာတှကေို အစားထိုးအသုံးခတြတျလာမယျ။တဖွညျးဖွညျးနဲ့အားပွနျယူနတေဲ့အခြိနျပါပဲ။
ဘယျအရာမဆို ကောငျးကြိုးဆိုးကြိုးဒှနျတှဲနတေယျဆိုတာမမပေ့ါနဲ့။အသညျးကှဲတဲ့ခံစားခကျြကဆိုးတယျ။ဒါပမေဲ့ အသညျးကှဲပွီးတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျကအရငျကထကျ ပိုပွီးရငျ့ကကျြသှားတယျ။အမွငျတဈမြိုးထကျ နောကျထပျအမွငျတဈမြိုးနဲ့လူတှကေိုကွညျ့တတျလာမယျ။ရှုထောငျ့အမြိုးမြိုးကနေ
တှေးတတျလာမယျ။လောကကွီးထဲကို ပိုပွီးဝငျဆနျ့လာတတျပါတယျ။ဒါက အကြိုးရှိတာပါပဲ။
အဆငျ့ ၈*ကိုယျဟာထငျထားတာထကျ ပိုပွီးသနျမာပါလားဆိုတာတှေးမိလာမယျ
ဒါကတော့ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျကနြေပျခွငျးတဈမြိုးပေါ့။ခဈြတဲ့သူနဲ့ဝေးရတယျ။အသညျးကှဲတယျ။နာကငျြရတယျ၊ဝမျးနညျးရတယျ။အဲ့ဒါတှကေိုကောငျးကောငျးကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ပွီး အခုကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျပွနျကွညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျဟာ ဒီဒဏျတှကေိုကောငျးကောငျးကွီးတောငျ့ခံနိုငျခဲ့တာကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ပွီးတော့ အရငျက မတှေးခဲ့ဖူးတဲ့အတှေးအချေါတှေ၊အတှအေ့ကွုံတှကေိုလညျး ရခဲ့ပွီ၊ကွုံခဲ့ပွီဖွဈလို့ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျကနြေပျနပေါလိမျ့မယျ။အရငျလို ပွနျပွီးပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ရယျမောနိုငျလာပါလိမျ့မယျ။
ကဲ ဒါတှကေတော့ အသညျးကှဲနတေဲ့အခြိနျမှာ ကွုံတှရေ့မယျ့အဆငျ့လေးတှပေါပဲ။ဒီအဆငျ့လေးတှပွေီးရငျ စိတျသဈလူသဈနဲ့ပွနျဖွဈမှာပါနျော။ဒါကွောငျ့ အသညျးကှဲနတေဲ့အခြိနျမှာ မဟုတျတာတှလြှေောကျလုပျတာ၊သိသိကွီးနဲ့လမျးမှားလြှောကျတာမြိုးတှမေလုပျပဲ အလိုကျသငျ့လေးအသညျးကှဲတဲ့အခြိနျကာလကို ခံစားကွညျ့ပါ။ဒီအသညျးကှဲဖို့အတှကျ ကိုယျခဈြရတဲ့လူတဈယောကျလုံးကိုအဆုံးရှုံးခံလိုကျရတာ တနျဖိုးကွီးပါတယျ 🌻